Zvishandiso Kupa Mari - Mamirioni Vagadziri
Kupa mari zvishandiso zvako kunotendera iwe kuchengetedza mari yako yezvinhu zvakasiyana zvebhizinesi Isu tine runyararo rwakasimba uye kubatana neinisangano yezvemari kune chako michina yezvemari zvinodiwa! Kusiyana neiyo yakajairika michina yemari michina, vatinoshanda navo bhizinesi vane zvirongwa zvekutanga-kumuka uye vakamisa mabhizinesi ane akanaka chikwereti. Kazhinji, makambani emari inotsigira michina anoda mashoma emwedzi mitanhatu mubhizinesi kuti vafunge nezvevachafanirwa kunyorera mari yacho kunyangwe kuburikidza nematanho edu izvi zvinogona kutaurwa. Iyo yakanakisa michina yemari michina haigoni kukuchengeta iwe uchamirira, ivo vanowana iyo yekusagadziriswa yekubatsira yako emari zvemari nekukurumidza sezvinobvira!
Equipment Kupa Rutsigiro:
Kubvumidza kana Kutenga
Nyowani kana Pre-muridzi
Tengesa - Reza Kudzoka
Zvemari zvinyoro Zvinodhura
Isu tinoshanda neMutengesi wako zvakare
Mitero Yakadzika Mabhadhariro Akabhadhara Hapana Akavanzika Mitero
Isu tinogadzirisa mari yemishini methodology kunyatso kukodzera bhajeti yako uye kuyerera kwemari zvinodikanwa uye zvinodikanwa, kuburikidza neruzhinji hombe rwemari & sarudzo dzekurenda. Mari yekutsanya nekukurumidza semaawa makumi mana nemasere.
Mari inowanikwa yezvambotaurwa
Waste & Kudzokorora Marori
Pumper / Vacuum Malori
Tow Matiraki / Chando Chinotonhora
Dump & Crane Miviri
Sevhisi YeMutya Malori
Chiedza, Pakati, & Heavy-Duty Marori
Kuvaka / Lawn / Turf Equipment
MaSedani / maVan / maFleets / maAmbulensi / Paratransit
Zvitoro zveRetail / Kiosks / RMU`s / Mahoridhe Displays
Tekisi / Limo / Livery
Mutyairi wemotokari / Mini Bhazi / Chikoro Bhazi
Zvivakwa zveHofisi uye fanicha
IT uye Foni Zvigadzirwa
Ndege, Zvitima nezvikepe